AlienCoin စျေး - အွန်လိုင်း ALN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို AlienCoin (ALN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ AlienCoin (ALN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ AlienCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ AlienCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
AlienCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AlienCoinALN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.429AlienCoinALN သို့ ယူရိုEUR€0.364AlienCoinALN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.328AlienCoinALN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.391AlienCoinALN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.83AlienCoinALN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.71AlienCoinALN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč9.49AlienCoinALN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.6AlienCoinALN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.568AlienCoinALN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.6AlienCoinALN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9.52AlienCoinALN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.32AlienCoinALN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.3AlienCoinALN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹32.1AlienCoinALN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.72.37AlienCoinALN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.589AlienCoinALN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.656AlienCoinALN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿13.35AlienCoinALN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.98AlienCoinALN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥45.75AlienCoinALN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩508.73AlienCoinALN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦166.08AlienCoinALN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽31.45AlienCoinALN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴11.78
AlienCoinALN သို့ BitcoinBTC0.00004 AlienCoinALN သို့ EthereumETH0.00112 AlienCoinALN သို့ LitecoinLTC0.00788 AlienCoinALN သို့ DigitalCashDASH0.00472 AlienCoinALN သို့ MoneroXMR0.00481 AlienCoinALN သို့ NxtNXT33.44 AlienCoinALN သို့ Ethereum ClassicETC0.0632 AlienCoinALN သို့ DogecoinDOGE123.71 AlienCoinALN သို့ ZCashZEC0.0052 AlienCoinALN သို့ BitsharesBTS13.21 AlienCoinALN သို့ DigiByteDGB13.72 AlienCoinALN သို့ RippleXRP1.52 AlienCoinALN သို့ BitcoinDarkBTCD0.0148 AlienCoinALN သို့ PeerCoinPPC1.42 AlienCoinALN သို့ CraigsCoinCRAIG195.33 AlienCoinALN သို့ BitstakeXBS18.28 AlienCoinALN သို့ PayCoinXPY7.48 AlienCoinALN သို့ ProsperCoinPRC53.79 AlienCoinALN သို့ YbCoinYBC0.00023 AlienCoinALN သို့ DarkKushDANK137.58 AlienCoinALN သို့ GiveCoinGIVE928.52 AlienCoinALN သို့ KoboCoinKOBO97.67 AlienCoinALN သို့ DarkTokenDT0.395 AlienCoinALN သို့ CETUS CoinCETI1238.2